निष्कपटता र व्यक्तित्वको बीच विभाजन बहस को हृदय र दर्शन, नैतिकता, पत्रकारिता, विज्ञान र अधिक मा विपरित छ। प्रायः "उद्देश्य" एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्यको रूपमा व्यवहार गरिन्छ जब "मानसिक" एक आलोचनाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। उद्देश्य निर्णयहरू असल छन्; मानसिक न्यायहरू मध्यस्थ छन्। उद्देश्य मानकहरू असल छन्; मानसिक स्तरहरू भ्रष्ट छन्।
वास्तविकता यति सफा र स्वच्छ छैन: त्यहाँका क्षेत्रहरू जुन मनपर्दो हो भन्दा बढी छ, तर अन्य क्षेत्रहरू जहाँ भित्रीता राम्रो छ।
उद्देश्य, विषयकता, र दर्शन
दर्शनमा , उद्देश्य र व्यक्तिपरिवारबीच भेदभाव सामान्यतया निर्णय र दावी गर्दछ जुन मानिसहरूले बनाउँछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।
यसैले, "म छ छ फुट फुट छ" भन्ने उद्देश्यलाई मानिन्छ किनकि यो सटीक माप व्यक्तिगत प्राथमिकताहरु द्वारा अनिनो हुने गरिन्छ। यसबाहेक, मापको शुद्धिकरण जाँच र स्वतन्त्र दर्शकहरूको पुन: जाँच गर्न सकिन्छ।
यसको विपरीत, "मन्त्रालयले मलाई मन परायो" एक पूर्णतया मानसिक निर्णय हो किनभने यो व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू द्वारा मात्र सूचित गर्न सकिन्छ - वास्तवमा यो निजी प्राथमिकताको एक बयान हो।
के उद्देश्य सम्भव छ?
निस्सन्देह, जुन कुनै पनि निष्पक्षता हासिल गर्न सकिन्छ - र, यसैले, उद्देश्य र व्यक्तिपरक अवधारणा बीच भेद वा चाहे होइन - त्यो दर्शनमा ठूलो छलफलको कुरा हो।
धेरै तर्क दिन्छन् कि साँचो निष्पक्षिकता प्राप्त गर्न सकिँदैन शायद सायद गणित जस्ता विषयहरु मा, जबकि सबै केहि विषयकता को डिग्री मा कम गरिनु पर्छ। अरूलाई वस्तुको कम कठोर परिभाषाको लागी तर्क गर्दछ जुन सम्भावनाको लागि अनुमति दिन्छ तर यो तथ्याङ्कमा आधारित छ जुन वक्ताको प्राथमिकताहरू बाट मुक्त छन्।
यसैले एक व्यक्तिको उचाइको छिनमा छिनमा पछाडिको उपाय हुन सक्छ तापनि माप को नैनोमीटरमा सटीक हुन सक्दैन, मापन यन्त्र पूर्णतया सटीक हुँदैन, व्यक्तिले माप दिएका व्यक्तिहरू सम्भव छ, र त्यसो त ।
मापन एकाइहरूको छनोट पनि बहस केहि डिग्री मानिन्छ, तर एक धेरै वास्तविक उद्देश्यको अर्थमा एक व्यक्ति छ छ फुट फुट छ, वा तिनीहरू हाम्रो विषयक प्राथमिकताहरू, इच्छाहरू, वा भावनाहरूको परवाह नगर्ने।
वस्तुगतता र व्यक्तित्वको बीचमा भेदभावको मौलिक प्रकृतिको कारण, नैतिकता, इतिहास, न्याय, र निश्चित रूपमा यी अवधारणाहरू बुझ्न आवश्यक कुराहरूमा कुनै पनि किसिमको दार्शनिक छलफलमा सहभागी छन्। वास्तवमा, पार्थिव र कमजोरीहरू बीचको साधारण छलफलको बारेमा सोच्न गाह्रो छ कि यी अवधारणाहरूले स्पष्ट भूमिका वा स्पष्ट रूपमा खेल गर्दैनन्।
सबै भन्दा सरल उदाहरण नैतिकताको प्रश्न हो: यो धार्मिक माफी माग्नका लागि धेरै धेरै सामान्य हो भन्ने तर्क छ कि तिनीहरूको विश्वासले नैतिकताको लागि आधारभूत आधार प्रदान गर्दछ। के यो साँचो हो, र यदि हो भने, के यो नैतिकताको भाग हुनुको लागि विषयकताको लागी समस्या हो? हिस्टोरिगोग्राफी वा इतिहासको दर्शनबाट आउँछ: कतिपय धार्मिक शास्त्रहरू के आधारभूत ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूको स्रोत र कुन डिग्रीका आधारभूत खाताहरू - वा यहाँ सम्म कि मात्र पुरातन प्रचार हो ?
तपाईं कसरी फरक कुरा बताउनुहुन्छ?
दर्शन को ज्ञान सम्भवतः चर्चा को हरेक क्षेत्र मा उपयोगी छ, ठूलो भाग मा, किनकी दर्शनले तपाईंलाई बेहतर बुझ्न र यिनी जस्तै आधारभूत अवधारणाहरु को उपयोग गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, किनभने मानिसहरू यी अवधारणाहरूसँग धेरै परिचित छैनन्, तपाईं उच्च स्तरका मुद्दाहरूमा बहस गर्नु भन्दा आधारभूत व्याख्याको थप समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
यो वस्तुतः एक बुरी कुरा होइन, तर यो तपाईलाई के आशा गर्दै थिए भने यो विषयमा निराशाजनक हुन सक्छ।
अस्तित्व र नरक
चर्च र राज्य को विभाजन
धेरै धेरै परमेश्वर, धेरै धर्महरू?
समीक्षा: नोकियन WR G2 सबै सीजन टायर
शीर्ष 10 आक्रोश! डिस्को सङ्गीतमा
"स्पीड-फाउ" प्लट सारांश र अध्ययन गाइड
पीजीए टूर सीआईएमबी क्लासिक
कसरी स्पेनी एक्सेन्ट टाइप गर्नुहोस् र म्याकमा विराम
कार्बन फाइबर प्रयोग गर्दछ
अमेरिकी संविधानमा तेस्रो संशोधनमा संरक्षणत्मक दृष्टिकोण
ग्यारेन्ट मोर्गनको जीवनी
Strumming 101 - एक शुरुवात गिटार स्ट्रिमिंग ट्यूटोरियल
न्यूयर्क मेट्रोपोलिटन एरिया
जिम क्रो नियमहरू बुझ्दै
संवाद र बहुविध विकल्प प्रश्नहरू: एक जागिर पत्ता लगाउन एक कठिन समय लिएर
कतिपय मेडिकल विद्यालयको लागत कस्तो हुन्छ?
अलबामा स्टेट यूनिवर्सिटी जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
स्ललोम वाटर्सकी कोर्सका लागि आयामहरू र चित्रहरू
सामाजिक अध्ययनका लागि रिपोर्ट कार्ड टिप्पणीहरू
लिङ्गोनसन कलेज प्रवेश
शीर्ष मधुमेह अमेरिकी प्राकृतिक आपदाहरू
स्टोल्यूम फ्लेमन्स 'स्टोन पेन नाम, मार्क ट्वेन